အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မြန်မာ့တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုကြီး (၅) စု | Ko Rohingya
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မငြင်းနိုင်သော သမိုင်းအထောက်အထားများနှင့် တည်ဆဲဥပဒေများအရ တိုင်းရင်း သား အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကို ပြုရမည့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မျိုးနွယ်စု ငါးစု ရှိပါသည်။ ထိုမျိုးနွယ်စု (၅) စုသည် ၁၈၂၃ ခုနှစ် မတိုင်မီက မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ရှိခဲ့သော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် လူမျိုးအုပ်စုကြီးများ ဖြစ်ပေသည်။ ၎င်းတို့မှာ
(၃) ကမာန် (အသိအမှတ်ပြုပြီး)
သို့ပါ၍ ထိုတိုင်းရင်းသား လူမျိုးအုပ်စုကြီး (၅) စုအပါအ၀င် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် နိုင်ငံသား များအားလုံးအား လုံးထွေး၍ မြန်မာမွတ်စလင်မ်ဟူသော စကားလုံးဖြင့် ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲမည်ဆိုပါက သမိုင်းဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုများ ထပ်မံ၍ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှ မွတ်စလင်မ်များအား ရည်ညွှန်း၍ ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲလိုပါက မြန်မာတွင် အောက်ကမြင့် (–့) ထည့်သွင်း၍ မြန်မာ့ မွတ်စလင်မ်များဟုသာ ရေးသားသင့်ပါသည်။ မြန်မာ့ မွတ်စလင်မ်၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မုစ်လင်မ်များဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။
ယခုနောက်ပိုင်း နိုင်ငံတကာ ပညာရှင်များမှလည်း Burmese Muslim နှင့် Burma’s Muslim ဟူ၍ ကွဲကွဲပြားပြား ဖြစ်အောင် ခွဲခြား၍ သုံးစွဲလာပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် Burmese Muslim ဟူသော အမည်နာမဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင် မျိုးနွယ်အုပ်စုတစ်စု ရှိနေခဲ့သောကြောင့်ပင်။ သို့ဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မွတ်စလင်မ်အားလုံးအား ရည်ညွှန်း သုံးစွဲသောအခါတွင် ၎င်းတို့အနေနှင့် Burma’s Muslim ဟု သုံးစွဲလာကြပါသည်။ တစ်ချို့ မြန်မာဆိုသည့်အမည်အား လက်ခံသုံးစွဲသူများ အနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မွတ်စလင်မ်အားလုံးအား ရည်ညွှန်းသုံးစွဲလိုသောအခါတွင် Myanmar’s Muslim ဟု ပြောင်းလဲ၍ သုံးစွဲလာကြပါသည်။
မြန်မာနှင့် ဗမာ အငြင်းပွားမှု ပြဿနာသည် မျက်မှောက်ခေတ် နိုင်ငံရေး၏ အရေးကိစ္စ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအငြင်းပွားမှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့ မွတ်စလင်မ် များအနေနှင့် စစ်အာဏာရှင်ဟောင်း၏ သုံးစွဲမှုဖြစ်သော မြန်မာအား သုံးမည်လော၊ သို့မဟုတ် ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားများ၏ သုံးစွဲမှုဖြစ်သော ဗမာအား သုံးစွဲမည်လော ဆုံးဖြတ်ကြရန် အလွန် အရေးကြီးပါသည်။ မြန်မာဟူသည် လူမျိုးတစ်မျိုးတည်း၏ အမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဗမာဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လူမျိုးအသီးသီးတို့ အား ပေါင်းစု၍ ခေါ်ဝေါ် သမုတ်သော နာမည်ဖြစ်သည်ဟု ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သား များမှ ယေဘုယျ အားဖြင့် သတ်မှတ်ထားကြပါသည်။
ဤသို့ တင်ပြရခြင်းသည် မုစ်လင်မ် ပညာတတ် သူတော်ကောင်းများအနေနှင့် ချင့်ချိန် တိုင်းတာ ဝေဖန်သုံးသပ် ဆုံးဖြတ်၍ သုံးစွဲနိုင်ရန် အကြံပြု တင်ပြလိုက်ရခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရန် ဂုဏ်အင်္ဂါရပ်များနှင့် ပြည့်စုံသော မျိုးနွယ်စုကြီး (၅) စုအနက်မှ ကျန်ရှိနေသော မျိုးနွယ်စုကြီး (၄)စု၏ သမိုင်းကို သုတေသန ပြုလုပ်၍ ပညာရှင် အဆင့် ဖော်ထုတ်ကြရန် အထူး အရေးကြီးပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းသည် အလွန်တရာ လိုအပ်နေသော မျက်မှောက်ခေတ်၏ တောင်းဆိုချက်များအနက်မှ တောင်းဆိုချက် တစ်ရပ် ဖြစ်သောကြောင့်ပင်။ လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်၊ စိတ်၊ ၀ိညာဉ်သုံးပါးစလုံး အေးချမ်းကြပါစေ။ အာမီးန်။
This entry was posted on March 11, 2013, in ကမာန်, ပန်းသေး, ပသီ, ပသျှူး, ရိုဟင်ဂျာ and tagged ကမာန်, ချမ်းမြေ့, တိုင်းရင်းသား, ပန်းသေး, ပသီ, ပသျူး, ရိုဟင်ဂျာ, မြန်မာ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← Genocide Crime ခေါ် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုကြီး (အမြည်း)	ပြောပြချင်တယ် ဦးခင်ရီရယ် →